ဗြိတိန်နိုင်ငံ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် လေး တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ Nick D’Aloisio လို့ အမည်ရပါတယ်။
Summly လို့အမည်ရတဲ့ iPhone application လေး တစ်ခုဖန်တီးပြီး Apple store မှာ ရောင်းချခဲ့ရာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ Summly app ဟာ စာအကူဖတ်ပေးတဲ့ သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကူညီပြီး ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးဖတ်သင့်တယ်။ ဘယ် ebook ဆိုဒ်ကိုဝင်ပြီဆိုရင် ကိုယ်က ဘယ်ဟာကို ရွေးသ့င်တယ်။ ကိုယ်ဝင်နေ ကျ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဝင်ပြီဆိုရင်တောင် ဘယ်သတင်းက ကိုယ့်အတွက် အဖတ်သင့်ဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ် ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ငယ်သေးပေမယ့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် App developer/ Webmaster တွေတောင် မဖန်တီးနိုင်တဲ့ app ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့ Nick ဟာ စံပြလူငယ် တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။
Shwe Mann is the next presidential contender for 2015. Here is his dodgy record, family ties, etc.
Unless you are dodgy or stupidly and selfishly loyal to Father (or Aba) Number One you don't rise in Burma's food chain since Ne Win installed the military rule in 1962.
လွှတ်တော်မှာဥက္ကဌကြီး အဖြစ် ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ လူကြီး လူကောင်းယောင် ဆောင်နေတဲ့ ရွှေမန်းဟာ ဘယ်လို လူစားမျိုးလဲ။
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နေတဲ့ လယ်သမားတိုင်း သိကြတယ်။ ရွှေမန်း မှာ သား ၂ ယောက်ရှိတယ်။ သူ နေရာ ရစမှာ အောင်သက်မန်းက မြေသြဇာ စက်ရုံထောင်ပြီး လယ်သမားတွေကို တဧက ဘယ်လောက်ယူရမယ်ဆိုပြီး အကြွေး စနစ်နဲ့ အတင်းအဓမ္မ ရောင်းချခဲ့တယ်။
လောလော လတ်လတ် အောင်သက်မန်း(ခေါ်) ရွှေမန်းကိုကိုက Red Link Communications လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ရာမှာ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး ကုဋေချီ လာဘ်စားမှုမှာ အစစ်ခံနေရတယ်။
တိုးနိုင်မန်းကတော့ နာမည်ကျော် ဇေကမ္ဘာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီး ခင်ရွှေရဲ့ သမီး ဇေဇင်လတ် နဲ့ လက်ထပ်ပြီး အမည်မဖော်တဲ့ လုပ်ခွင့်ရ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတယ်။
ခရိုနီ အကြီးစား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇေကမ္ဘာ ခင်ရွှေ ( လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ရွှေမန်းနဲ့ သမီးပေး- သမက်ယူလုပ်ထားတဲ့သူ) ကတော့ သူအနိုင်ကျင့်သမျှ၊ မတရား သိမ်းထားတဲ့ မြေယာတွေ မှန်သမျှရဲ့ အပြစ်တွေကို အိုးအိမ် ဦးစီး ဌာနမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ပြောဆိုနေတယ်။ လယ်သမားတွေ သူ သိမ်းထားတဲ့ လယ်ထဲ ဆင်းရင် သူ့ဝန်ထမ်း(၃၀၀၀)ကျော်နဲ့ ရိုက်သတ်မယ်၊ လယ်သမားတွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ နေမျိုးဝေကို ကြိုးနဲ့ တုတ်ပြီး ထောင်ထဲ ပို့ မယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေကိုတော့ ဒုသမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်းတို့ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့က ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည် စီစစ်- စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ဖို့ လမ်းစမမြင် ဖြစ်နေတယ်။ ခရိုနီ အကြီးစား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇေကမ္ဘာ ခင်ရွှေဟာ တချိန်က ၀န်ကြီးချုပ်ပြုတ် ခင်ညွန့်နဲ့ ကပ်ပြီး စားကွက် ဖန်တယ်။ လက်ရှိ အနေမှာ ရွှေမန်း အားကိုးနဲ့ မိုက်ရိုင်း နေတယ်။
- ဘာပဲပြောပြော အော့ချက်(ဒ်) ကုမ္ပဏီ ကို ဘယ်သူပိုင်ပါတယ်လို့ ထုတ်ဖော်တာ မသိကြရသေးဘူး။
ရဲတွေ ရာချီပြီး- ချီတက် အကာအကွယ်ယူ၊ အသက်ပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြီး ဖြစ်တော့ နောက်ကွယ်မှာ အကောင်ကြီးကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲ လူတိုင်း သိနေကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖိုးသန်းရွှေကြီး ပိုင်သလား၊ ရွှေမန်း မိသားစု (အောင်သက်မန်း)နဲ့ ဆက်စပ် နေသလားဆိုတာ သတင်း ထိန်ချန် ပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေတာ မြင်ရတယ်။
ဦးသိန်းစိန် တစ်ယောက် ဥရောပ နိုင်ငံခရီး လှည့်လည်ပြီး စီပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရပ်ဖို့၊ ဥရောပ ယူနီယံက အကူအညီတွေ တိုးပေးဖို့၊ အကြွေးတွေလှော်ပေးဖို့ စည်းရုံးနေချိန်မှာ မအူပင်ခရိုင် မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ပလောင်းကျေးရွာမှာ အသိမ်းခံ လယ်ယာမြေတွေကို ပြန် ရဖို့ တောင်းဆိုရင်း လယ်သမားနဲ့ ရဲတွေကြား ပစ်ခတ် သန်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပြန်တယ်။
အော့ချက်(ဒ်) ကုမ္ပဏီပိုင် ဧက (၅၅၀) ရှိ၊ ငါးကန်အတွင်းသို့ စပါးစိုက်ပျိုးရန် အကြောင်းပြ၍ ၀ါးတိုင်များ ၀င်ရောက်စိုက်ထူခြင်း၊ ကန်ဘောင်မှ ၀ါးများ ခုတ်ယူခြင်းတို့ကို ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ မြင့်စိန် တိုင်ကြားတယ်။ ဒါကြောင်း ရဲတွေက ကူညီပါရစေဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ပြည်သူတွေဘက် မထားဘဲ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ လက်ဝါးရိုက်ထားတဲ့ ခရိုနီတွေ ဘက် အကူအညီပေးခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်၏ ကျန်းမာရေးအကြောင်း တကမ္ဘာလုံး အုပ်အော်သောင်းနှင်း ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ဗိုလ်စေားမောင် တို့ တက်လာသော ခေတ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်နှီပါးလောက်မှပင်မကဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
တယ်လီဖုံးကဒ်များ နဲ့မီထီလာလူသတ်ပွဲကို ချွေးသိပ်
သမ၀ါယမစနစ်ကို ပြန်သွားနေတဲ့ တယ်လီဖုံးကဒ်
“၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်ဆီကနေငှားရမ်းအသုံးပြုရသော ဖုန်း”
1500 ကျပ်တန်ဖုန်းများအား မန္တလေးတွင် ယနေ့ ခွဲတမ်းများဖြင့် ဦးရာစနစ်ဟု ဆိုပြီး စတင်ရောင်းချရာ......အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုး များမှာ 1500 ကျပ်တန်ဖုန်းများကို ပြည်သူလူထု ခွဲတမ်းမပေးမီအချိန်ကပင် လွယ်လင့်တကူ ရရှိကိုင်ဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှာ နံနက် တစ်နာရီ ၊ နှစ်နာရီ ၀န်ကျင်ကတည်းက အိပ်ရေးပျက်ခံကာ တန်းစီ ၊ ချွေးကြအောင်ပင် စောင့်ဆိုင်းကြမှ ရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။
အချို့သော သူဌေးရပ်ကွက်များတွင် ခွဲတမ်းချပေးသော ဖုန်းကတ်အရေအတွက်မှာ ပိုလျှံနေသည်ကိုလည်းသိရသည်။အဘယ်ကြော့င့်ဆိုသော် သူဌေးရပ်ကွက် ဖြစ်နေသဖြင့် 1500 ကျပ်တန်ဖုန်းများကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှာ ရရှိထားသော ခွဲတမ်းအား ပြည်သူလူထုအားအကုန် ခွဲဝေပေးခြင်းမရှိပဲ အချို့ကိုသာပေးကာ ကျန်သည်များကို VIP ဟုဆိုကာ ချန်လှပ်ထားမှုများလည်းရှိနေကြောင်း အတွင်းသတင်းအရ သိရသည်။
ယခုအချိန်တွင် 1500 ကျပ်တန်ဖုန်းများမှာ ပြင်ပပေါက်ဈေး ငါးသောင်း ၀န်းကျင်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။အကြောင်းမှာ အိမ်ထောင်စုဇယာ နှင့် မှတ်ပုံတင်မူရင်းများ ပါမှ ရောင်းချပေးနေသည့်အတွက် အိမ်ထောင်စုဇယား နှင့် မှတ်ပုံတင်များမရှိသည့် သူများမှာ ပေးဝယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံ ၊ ၊ 1500 ကျပ်ဖြင့် ဖုန်းရရှိ ကိုက်နိုင်ရန် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် နံနက် အစောမှ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြသော ပြည်သူလူထု၊
မြို့သာ စီမံကိန်းမှာလည်း လည်း လယ်တွေအသိမ်းခံရပြီ
အထက်ဗမာပြည်မှာ လယ်လုပ်စားရတာ ဟာ အောက်ဗမာပြည်က လယ်သမားတွေထက်ပိုမိုခက်ခဲပါတယ် မိုးမျှော် ဆည်မျှော်စိုက်ရတဲ့ ဘ၀မျိုးပါ။ မိုးခေါင် ဆည်ရေမရဆိုရတော့လယ်တွေ အကုန်လုံး ပျက်စီးပါတော့တယ်။ အခုလည်း လယ်ထွန်ဖို့ အချိန် နီးလာပါပြီ။
မန္တလေးက မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေ ကြားမှာ တံတားဦး စီမံကိန်း၊မြို့သာ စီမံကန်းဆိုပြီး လယ်ယာတွေကို ခြိမ်းခြောက် သိမ်းဆည်းခံနေရကြောင်း ကြားသိနေရပါတယ်။၈၈ မျိုးဆက်များကတော့ လယ်သမားများ မိမိဆန္ဒမပါဘဲ လယ်ယာမြေကို ရောင်းချစရာမလိုကြောင်းပါးစပ်နဲ့သာ ပြောခဲ့ပြီး အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသမှ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းသို့ သွပ်သွင်းခံလိုက်ရတဲ့ငန်းဇွန်းမြို့နယ် ကြက်ပြင်ရွာမှာတော့ မြို့သာစီမံကိန်းဆိုပြီး ၇ မိုင်ပါတ်လည်ရှိလယ်ယာများမတရားခြိမ်းခြောက် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံနေရကြောင်း သိရပါတယ်။ ကာလပေါက်ဈေးထက် လျော့နည်းပြီးမြေတဧက ၁သိန်း ၅ သိန်း ၁၀ သိန်း ပေးကာ။ လျှော်ကြေးမယူရင်လည်း အသိမ်းခံရမှာပဲ လျှော်ကြေးယူပြီးထွက်သွားစသည်ဖြင့် မြန့်မာနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးေ၇းကုမ္မဏီမှ စစ်အစိုးရ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များနှင့်ပေါင်းကာ စက်မှုဇုံများ ဖေါ်ဆောင်ရန် အတွက် လယ်သမားများအား အကြပ်ကိုင်နေကြောင်း သိရပါသည်။ယခုလို မိုးဦးကာလမှာ လယ်သမားများဟာ ကိုယ့်လယ် ကိုယ်မထွန်ရ၊ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေမှာနေရတာကိုလည်း စိတ်ပျက်နေကြောင်းလည်း ပြောကြားနေကြပါတယ်။
လယ်သမားများအနေဖြင့် ယခုအခါတွင် သူတို့ဘက်မှရပ်တည်ပေးနိုင်မဲ့ ပြည်သူ့ပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကတိတွေ ပေးခဲ့တဲ့သူများ၊အခြားသော ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ပုဂ်ဂိုများကို အခြေအနေ လာရောက်လေ့လာကြစေလိုပြီး အကူအညီလည်းပေးကြရန် မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
သတင်းကောင်းတခုကတော့ ဦးသိန်းစိန် ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာမြေတိုင်းစာရေးများ လှူနိုင်တန်းတိုင်း သူဌေး ဖြစ်နေကြကြောင်းလည်း သတင်းကောင်း ရရှိပါတယ်။
”ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာပြီး ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ဖို့ စဉ်း စားထားတာရှိတယ်”ဟု ဦးသိန်းညွန့်ကပြောသည်။ အစိုး ရသစ်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရန် ကုန်မြို့၌ အုပ်စုဖွဲ့ရမ်းကားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါအမှုများကို ကျူးလွန်သူများမှာ လက်ရှိ အာဏာရထားေ သာ အရာရှိများ၏သားသမီးများ နှင့် တစ်ချိန်ကအာဏာရခဲ့သည့် အငြိမ်းစားများ ၏သားသမီးများ ဖြစ်နေပြီး ညပိုင်းတွင်ပြုလုပ် သော ၄င်းတို့၏ အပန်းဖြေကားမောင်းပြိုင်ပွဲများ သည်လည်း သာမန်လူများကို ထိခိုက် သည်အထိ ဖြစ်လာနေသည်ဟု ဦးသိန်း ညွန့်က ပြောသည်။”အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ က အာဏာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ သြဇာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင် တိုင်ချက် တောင်မှ မဖွင့်ရဲ ဘဲ၊ တရားတောင်မှ မစွဲရဲဘဲ။ ဒါဟာ တိုင်းပြည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အင်မတန်မှရုပ်ဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲ”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ တရားလွှ တ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ ကလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးယူ သည့်အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း အဓိကကျကြောင်း၊ လူတစ် ဦးကို အရေးယူတော့မည်ဆိုပါက မည် သည့်ပုဒ်မနှင့်အရေးယူမည်ကို ဦးစွာ စဉ်းစားရ မည်ဖြစ်ပြီးထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမည်ဆို ပါက ကျူးလွန် သူ၏ မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲ သူတို့ ၏လုပ်ရပ်ကိုသာကြည့်၍ အရေးယူရမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောသည်။ ”ဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲ သက်သက်မဲ့လုပ် တာဆိုရင် ဒါတိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ပျက်ပြားအောင်လုပ်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူ့ သားသမီးဆိုတာ မကြည့်နဲ့။ ဘယ်သူ့သားသမီး ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရင် ပုဒ်မက သေးသွားတာပဲ” ဟု ဦးကိုနီက ပြောသည်။သာမန်နာကျင်စေမှု ပုဒ်မ-၃၂၃၊ လက်နက် နှင့် နာကျင်စေမှု ပုဒ်မ-၃၂၄၊ အပြင်းအထန် နာ ကျင်စေမှု ပုဒ်မ ၃၂၅ တို့သည် အာမခံပေးခွင့် ရှိသောအမှုများ ဖြစ်ပြီး ထက်မြသည့် လက်နက်တစ်ခုခု ဖြင့် အပြင်းအထန်နာ ကျင်စေမှု ပုဒ်မ ၃၂၆ သည်အာမခံပေးခွင့်မရှိသော အမှု ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်ကျူးလွန်သူသည် ဖျားနာ နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ပေါ် မူတည်၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၈ အရ အာမခံပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် အုပ်စုဖွဲ့ ရမ်းကားမှု များသည် အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါက အရေးပေါ်စီမံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(ည)ဖြင့် စွဲနိုင်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။ ”၂ဝ၁ဝ လောက်အ ထိ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင် စကားတစ်ခုပြောလိုက်လို့ မှားတယ်ဆိုရင် ၅(ည)နဲ့ အရေးယူ လိုက် တယ်။ အရေးယူချင်တဲ့ကိစ္စဆို ပုဒ်မ လေးငါးခြောက်ခုနဲ့ အရေးယူခဲ့တာတွေ ရှိတာပဲ။ ဆိုလိုတာက တရားစွဲတဲ့အဖွဲ့ အစည်း၊အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာပိုင်တွေက ဒီပြဿနာကိုမလို လားဘူး၊ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆို ရင် ထိရောက်တဲ့ ပုဒ်မ၊ ထိုက်တန်တဲ့ပုဒ်မနဲ့ အရေးယူ၊ တရားရုံး ကလည်း ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေး၊ အဲဒီ လိုလုပ်ရင် ဒါတွေလျော့ပါးသွားမှာ ပဲ” ဟု ဦးကိုနီ က ပြောသည်။ လိုအပ်ပါကအဆိုပါအမှုများအ တွက် ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းသင့်ကြောင်းလည်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များက ပြောသည်။
”လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေတွေက သိပ်ပြီး တော့ ကြာနေပြီ။ သိပ်ကြာ မြင့်တဲ့ကာလက ပြဋ္ဌာန်းထားတာဆိုတော့ အရာရာကို ခြုံငုံမိ အောင်တော့မရှိ ဘူး။ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှု မရှိဘဲ အုပ်စုဖွဲ့ရမ်းကားတာတို့၊ ကားမှန်ဖျက်ဆီးတာတို့၊ လူတွေကိုလိုက်ရိုက်တာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သီး သန့်ဥပဒေမရှိ ဘူး။ ဥပဒေတစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းသင့် တယ်” ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီက ပြောကြားခဲ့သည်။ယခင်လအတွင်းက ပြည်သူ့ရင်ပြင် Happy Zone အပန်းဖြေကစားကွင်းတွင် လူငယ်တစ်စု က အသက် ၃ဝ ကျော်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ရန်စ ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုလ ၁၁ ရက်နေ့ တွင်လည်း အရာရှိကြီးအချို့၏သားများ ပါဝင် သည့်လူငယ်တစ်စုက ကင်ဒိုဓားနှင့် သံပိုက်လုံး များဖြင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သျှိုင်းနှင့်ဝင်ရောက် ဖြန်ဖြေသူ မင်းသတ္တိတို့အား ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဟု သျှိုင်းကဆိုကြောင်း ဧပြီ ၂၂ ရက်ထုတ် The Voice Daily တွင် ဖော်ပြထားသည်။
"ကျနော့် မျက်စိနဲ့ ကိုတွေ့တာ။ လူနှစ်ယောက်က သေနှင့် နေပြီ။ ကျနော် ရှေ့မှာဘဲ နောက် ငါးယောက် ကို သတ်လိုက်တယ်။"
သူဟာ မွတ်စလင် တွေကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ပါ သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူအုပ် ကြီးက သူ့ကို ခြိမ်းခြောက် တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီ နောက်မှာတော့ မန္တလေး တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ရဲမြင့်ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး အဖြစ် အပျက် တွေကို တင်ပြ ပါတယ်။ “သူက ရဲတွေကို အရေးယူ လုပ်ဆောင် ကြဖို့ အမိန့် ပေးထား ပြီးပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်တာ မရှိဘူး” လို့ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
ပြည်မြို့တွင် ချိန်းတွေ့နေသည့် သမီးရည်းစား စုံတွဲအား လူ ၃ ဦးမှ ပစ္စည်းယူ လူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့ရာ မသင်္ကာသူ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိရာ တပ်မတော်သားများဖြစ်နေ
အကြမ်းဖက် လုယက်ခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးကို ပြည်မြို့ ဆေးရုံပေါ်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကောင်းမြတ်မင်း / ဧရာဝတီ)